के गर्दै छ नगरपालिका ? छ महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च, लक्ष्यअनुरुप प्रगति भएन - Jillakhabar.com
के गर्दै छ नगरपालिका ? छ महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च, लक्ष्यअनुरुप प्रगति भएन
भक्तपुर, माघ २०७७ ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को छ महिनामा कुल बजेटको ३१ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । आव २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामा शुरु गर्दै नगरपालिकाको आठौँ नगरसभामा सो जानकारी दिइएको हो ।
सोमबारबाट शुरु भएको नगरसभामा नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बजेट विनियोजनतर्फ प्रगति कमजोर भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ का कारण आवको छ महिनामा लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी छ महिनालाई लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यअनुरुप कार्यक्रम अगाडि बढाउने तय भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपप्रमुख बिना बाँस्तोलाले चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चालु आवमा कुल रु एक अर्ब ४८ करोड २७ लाख तीन हजार ६०० विनियोजन गरे पनि रु ४६ करोड ६० लाख ४६ हजार ५०० खर्च भएको उल्लेख गर्नुभयो । यसमा पुँजीँगततर्फ रु ८१ करोड २५ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म रु २४ करोड ४६ लाख ७५ हजार ६२४ खर्च भएको छ ।
उहाँले कुल बजेटको चालुतर्फ रु ६७ करोड एक लाख १३ हजार ६०० बजेट विनियोजन गरेकामा रु २२ करोड १३ लाख ७० हजार ८१७ अर्थात् ३३ दशमलव तीन प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । नगरपालिकाले चालु आवमा रु २८ करोड ७१ लाख ६० हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएकामा रु सात करोड २६ लाख ७६ हजार ८४४ अर्थात् २५ दशमलव ३० प्रतिशतमात्रै लक्ष्य हासिल गरेको छ ।
नगरपालिकाले शिक्षा, युवा तथा खेलकूद विकासअन्तर्गत कुल रु तीन करोड २८ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेकामा रु १८ लाख ४६ हजार ४५ अर्थात् पाँच दशमलव ६० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । स्वास्थ्यतर्फ नगरपालिकाले रु तीन करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा छ महिनाको अवधिमा जम्मा रु १७ लाख ९४ हजार ९६३ अर्थात् पाँच दशमलव ३० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पशुपक्षी प्रवर्धनतर्फ नगरपालिकाले कुल रु ७६ लाख ६२ हजार रकम विनियोजन गरेकामा रु आठ लाख २८ हजार २५२ खर्च गरेको र कृषि विकासतर्फ रु एक करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकामा रु १५ लाख नौ हजार ८७० अर्थात् सात दशमदलव ६६ खर्च गरेको छ ।
नगरसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार सहकारी प्रवर्धन, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, पूर्ण सरसफाइ ताथ बास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको उपप्रमुख बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।
Previous articleबिहीवारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान
Next article‘जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा पुनः जनमतमै जानु न्यायोचित’ – महान्यायाधिवक्ता